Tarisa bhatiri reAirPod muApple Watch | Ndinobva mac
AirPods yanga iri yekugadzirwa kweApple kwemakore gumi apfuura, hapana mubvunzo. Ini ndinofunga anga ari iwo akanyanya kukopwa mahedhifoni. Pakutanga kuvengwa nevazhinji, ikozvino haugone kubata imwe wired mahedhifoni. Chinhu chega chatinogona kupomera mhosva ichiri bhatiri ravo. Izvo hazvina basa nemhando, Pro kana zvakajairwa (uye pakati peizvi, chizvarwa chekutanga kana chechipiri) uye chinhu chakanyanya kushata ndechekuti isu hatigone kuona neziso bhatiri ratakasiya, Kunze kwekunge isu tine Apple Watch.
Isu tinoziva kuti kune nzira dzinoverengeka dzekugonesa bhatiri iro rakasiiwa kwete chete kune mahedhifoni, asiwo kubhokisi ravanochengeterwa nekuchaja. Asi nekuda kweizvi isu tinofanirwa kushandisa iyo iPhone. Kunyange pane nzira yekuiona uye zvinongoda kumonyoroka ruoko.
Bhatiri ruzivo rweAirPods paApple Watch. Maitiro ekuzviita
Kuti uone huwandu hwebhatiri yeAirPods, isu takatokuudza kare kuti hazvina basa nemhando kana vhezheni, isu tinongofanirwa kuziva nzira yekuwana yakakodzera menyu. Kana iwe waisaziva, kana iwe uchida kuona bhatiri rake Apple Watch Iwe unofanirwa kutsvedza munwe wako kubva pasi kumusoro uye kana tikadhinda iyo icon isu tinokwanisa kumisikidza simba rekuchengetedza maitiro.
Asi kana panguva iyoyo ukadzvanya icon iwe une maAirPod uye wakabatana neiyo iPhone (pachena), iwo mabhatiri emazinga emahedhifoni uye zvakare bhokisi kwadzinochengeterwa uye kuchinjwazve zvichaonekwa. Inonyanya kubatsira kana tisingade kana kutarisa iPhone uye tinoda kuziva kuti maAirPod achabata here kana kuti tichazovachaja nekukurumidza.
Isu tinovimba iyi dzidziso yakubatsira iwe, chokwadika, kubvira pandakaiwana ini ndakaishandisa iyo yakati wandei Zvinoseka kuti chimwe chinhu chinoshanda, saka "yakavanzwa" mukati meApple Watch menyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Tarisa bhatiri reAirPod paApple Watch
Chero chero PDF kune Izwi Shanduro yeMac, iine 60% dhisikaundi.